Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO : Dagaaladii Ugu Dambeeyay oo Cadawga Khasaare Laxaadleh Lagu Gaadhsiiyay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO : Dagaaladii Ugu Dambeeyay oo Cadawga Khasaare Laxaadleh Lagu Gaadhsiiyay
Posted by ONA Admin	/ October 30, 2014
Wararka ay nasoo gaadhsiiyeen Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa soo tabinaya in ay si habsami ah u socdaan dagaaladii ay CWXO kaga xoreynayeen dalkeena gumaysiga daalan ciidanka uu ku soo uruuriyay ciida Ogadenia. Dagaaladan oo ka dhacay meela kala duwan oo wadanka kamid ah ayaa inta la hubsaday lagaga dilay cadawga ciidan gaadhaya 50 askari oo darajooyin kala duwan lahaa, meesha uu dhaawaca ay kala tageen goobaha dagaalka uu intaa ka badan yahay. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa u dhacay sidan;
18/10/14 Qulqul oo dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle ka tirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhax maray waxaa qudha lagaga jaray 15 kamid ah ciidanka gumaysiga meesha 20 kalana lagaga dhaawacay.
22/10/14 Aadaamabaro oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal ka dhacay waxaa cadawga lagaga dilay ciidan kor u dhaafaya 15 oo darajooyin kala duwan lahaa, waxaana lagu dhaawacay 7 kale.
24/10/14 Waldayga oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
25/10/14 Shaashadheere oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/10/14 Bali-jacle oo Dagmada Dhagaxmadow katirsan weerar ay cwxo ku qaadeen ciidan uu cadawku leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa qudha kaga jareen 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/10/14 Bali-jacle oo Dhagaxmadow katirsan weerar ay mar kale CWXO ku qaadeen waxay cadawga kaga dileen 3 askari 4 kalana way kaga dhaawaceen.